Kedu ka nke kacha nta ga-esi metụta ụwa? | Network Meteorology
Kedu ka anyanwụ ga-esi metụta ụwa?
Kwa afọ iri na otu ma ọ bụ karịa, ntụpọ ndị dị na kpakpando anyị na-agwụ. Nke a bụ ihe a maara dị ka opekempe nke anyanwụ ma, n'oge anyị na-agwa otu. N’agbata afọ 2019-2020, a na-atụ anya na ha ga-eru ebe kachasị dị ala ha, mana Olee otú ọ ga-esi emetụta ụwa?
Eziokwu bụ na amabeghị ya nke ọma, mana anyị nwere ike ịmata ihe ga-eme site na NASA.
Anyanwụ na-agabiga usoro okirikiri nke afọ iri na otu ma ọ bụ karịa, n'etiti nke enwere kachasị, ya bụ, mgbe ọ nwere oghere ndị ọzọ, na opekempe. A maara na ọ nwere ọtụtụ ntụpọ, ọ na-ekpo ọkụ karị, na na ntụle, ole na ole dị, ọ ga-adịkwu oyi. N'ihi gịnị? Dịkwa mma, radieshon na-erute anyị site na Anyanwụ dị ntakịrị 0,1% n’etiti anyanwụ kacha na nke kacha nta. O nwere ike iyi ihe pere mpe, ihe ọ bụla, mana ekwesịrị iburu n'uche nke ahụ eze kpakpando nwere ike ịpịpụta nnukwu ume.
N’agbata afọ 1645 na 1715 o nwere ntụpọ pere mpe, na ụwa okpomọkụ dị 1ºC obere adịbu. Ọ bụ oge akpọrọ "Maunder kacha nta", ọ bụ ezie na ụfọdụ maara ya nke ọma maka "Little Ice Age." N'oge ahụ, ma Europe ma Ebe Ugwu America nwere oge oyi, ebe mmiri kpụkọrọ ebe na-ada.
Maunder kacha nta
Ma nke ahụ ọ bụ ihe na-echere anyị n'isi nso? O nwere ike ịbụ, mana nke bụ eziokwu bụ na enwere ọdịiche dị mkpa: ugbu a, ikuku jupụtara na carbon dioxide, nke pụtara na anyị nwere ike tufuo jụrụ oyi ntakịrị. Na, n'ụzọ ọ bụla, anyi agaghi enwe ike ime otutu ihe megide oke oke ikuku geomagnetic nke gha abiakute anyi. Na nke a, Dean Pesnell nke NASA Goddard Space Flight Center kwuru na a ọkwa na »n'oge nke kacha nta na anyanwụ, ebe ndọta Anyanwụ na-ebelata ma na-enye obere nchebe site na ụzarị anyanwụ. Nke a nwere ike bụrụ ihe iyi egwu dị egwu nye ndị na-agụ kpakpando na-agagharị na mbara igwe. '
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Kedu ka anyanwụ ga-esi metụta ụwa?
Macron: "Iji lụso iyi ọha egwu ọgụ, anyị ga-edozi mgbanwe ihu igwe"
Nnukwu data na ọdịnihu na amụma ihu igwe